Aadan Madoobe oo jeediyey codsi cusub oo ku saabsan doorashada madaxweynaha - Caasimada Online
Home Warar Aadan Madoobe oo jeediyey codsi cusub oo ku saabsan doorashada madaxweynaha
Aadan Madoobe oo jeediyey codsi cusub oo ku saabsan doorashada madaxweynaha
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ka wado holwaha doorashada ayaa markaan la kulmay qeybaha kala duwan ee ururadda bulshada rayidka.
Kulanka oo ka dhacay hoyga uu Sheekh Aadan Madoobe ka dagan yahay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay kaalinta ay ururada bulshada rayidka ka qaadan karaan arrimaha doorshada madaxweynaha dalka.
Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa ururada bulshada ka codsaday inay kala shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici laheyd doorashada madaxweynaha oo lagu ballansan yahay 15 May ee sanadkaan.
Ururada Bulshada ayaa guddoomiyaha Baarlamaanka u ballan qaaday inay garab ku siinayaan doorashada inta ay awoodaan, waxayna guddoomiyaha cusub uga mahadceliyeen waqtiga uu gelinayo doorashada.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa ku booriyey bulshada rayidka in ay kaalintooda horumarineed ay sii laba jibbaaraan si dalka looga bixiyo xaaladaha qatarta ah ee uu wajahayo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa tan iyo markii la doortay kulamo kala duwan oo ku saabsan Arrimaha doorashooyinka wada, iyada oo muddo kooban ay ka harsan tahay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Doorashada Soomaaliya ayaa waxay soo jiitameysay muddo 1 sano ah, waxaana ugu dambeyn suurta gashay inuu dalka yeesho Baarlamaanka iyo guddoomiye taasoo dalka ka badbaadisay firaaq dastuuri ah.